Jikwaa ihe niile aga-eme na TickTick | Gam akporosis
TickTick bụ ngwa maka ndepụta ịme ihe nke ị na-ekwesịghị ịhapụ
Manuel Ramirez | | Ngwa gam akporo
TickTick abụghị ngwa ọhụrụ, ma ọ dịla anya kemgbe ọtụtụ afọ ma anyị chọrọ ịme ihe ngosi na ya iji gosipụta àgwà ya kachasị mma. Ngwa maka ihe ichoro ichikota edere nke di oke nma ma anyi kwadoro site na Android.
una ngwa iji nweta ndepụta na ihe e ji mara ya ukwuu dịgasị iche iche nke e ji mara. O nwekwara ụdị ihe ịga nke ọma na ọtụtụ mgbakwunye iji nye aka ahụ pụrụ iche na ọrụ niile anyị na-agbakwunye n’ime izu. Anyị na-ekwu maka eserese nke gosipụtara ụbọchị kachasịkarịsịrị mmadụ ma ọ bụ ọtụtụ ọrụ anyị na-arụkarị kwa ụbọchị. Ka-esi mara nke a ngwa a na-akpọ TickTick a obere ihe anya.
1 Mekọrịta ọrụ gị na igwe ojii
2 Jiri TickTick rụkọta ọrụ na ndị ọzọ
3 TickTick si adịchaghị nhọrọ
Mekọrịta ọrụ gị na igwe ojii
The uru nke inwe ekwentị mkpanaaka na ngwa dị ka TickTick idu ke eziokwu na anyị ga-enwe ike ttinye ọrụ niile anyị na-arụ n'igwe ojii. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị dee ederede na mkpanaka gị ị ga-enwe ya na PC gị yana na mbadamba gị. N'ụzọ nke a, ọ ga-adịghị mkpa site na ngwaọrụ ị na-dee, ị ga-enwe ya na ígwé ojii na TickTick.
TickTick nwere a adịchaghị ndenye aha, ma ọgụgụ ka ukwuu nke ya atụmatụ ị nwere ha n’agaghị agafe igbe. Ya mere ị nwere ike ijikwa ụbọchị gị na ịdị mfe nke ịhụ ngwa ngwa nke ndepụta nke ọrụ ị ga-arụ ma ọ bụ nke ị meworị.
Otu n'ime ndị na-akpali ihe nke TickTick na- wijetị nke ahụ ga-enye anyị ohere ịchịkwa ọrụ ndị ahụ site na desktọọpụ nke ekwentị anyị. Ọrụ ndị a nwere ike bụrụ ihe na-emegharị ma na-agbanwe agbanwe ka ha wee nwee ike ijikwa ha wee gbanwee ha ka anyị mechara ụfọdụ isi ha.
Jiri TickTick rụkọta ọrụ na ndị ọzọ
Ma dị ka ọ na-enweghị ike na-efu, na imekọ ihe bụ ihe ọzọ na-eme nke ngwa ndepụta a. You ga-enwe ike ịkekọrịta ndepụta nke ihe aga-eme iji nye ha otu ndị gị na ha na-arụ ọrụ ma ọ bụ ọbụna nyefee ezinụlọ gị ndepụta nke onyinye maka ekeresimesi na-esote. Ọ dị mkpa na ngwa nke ndị a na-enye anyị ohere ịmekọrịta, ebe ọ bụ na n'ọtụtụ oge anyị na-agakarị ekerịta omume n'etiti ndị ọzọ. Lee TickTick anaghị adaba.
Mana njirimara ndị a adịghịkwa:
Tinye ọrụ site na email
Bulite mgbakwunye na ọrụ dị ka ihe oyiyi ma ọ bụ faịlụ
Mmekọrịta na ngwa kalenda
Kewaa ihe aga-eme na taabụ
Ọrụ anọ dị mkpa
Nhọrọ nhọrọ site n'usoro, ụbọchị, aha ma ọ bụ ihe kacha mkpa.
Kwesịrị inwe kalenda na nke na anyị nwere ike ịhụ ọrụ anyị nyere ezigbo iwu ime na agba ha maka ihe kacha ha mkpa, yabụ site na oghere a anyị ga-enwe njikwa niile na anyị ga-enwe ike ịgbasa izu ahụ nke ọma.
TickTick si adịchaghị nhọrọ
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgafe site na adịchaghị nhọrọ nke a ngwa, anyị nwere ike ichikota ha:
Kalinda zuru okeNweta ọzọ echiche kalenda. Nịm mbido na ọgwụgwụ ụbọchị maka ihe aga-eme na ya ọbụna na-ahapụ gị denye aha na-atọ ndị ọzọ ngwa kalenda.
Hazie ndepụta "smarts" ma ọ bụ "smart": Site akpọchi a mma ị ga-enwe ike ịdị ka mgbanwe dị ka ị chọrọ na anatara.
Mepụta ruo 299 anatara, Ọrụ 999 kwa ndepụta na 199 subtasks kwa ọrụ. Yabụ, e nwere ndị fọrọ nke nta ka ókè na TickTick
Debe ihe niile n'okpuru nchịkwa: hụchalụ ọrụ niile na ndepụta. Na-esochi niile oru ngo.
Ndekọ ọnụ ọgụgụ: ị nwere ike ịhụ oge niile ka esi mezue ọrụ
TickTick nwere ọzọ adịchaghị atụmatụ, ma dị ka anyị kwuru, ị nwere ike fọrọ na-free na-enwe a zuru ezu na-eme ndepụta ngwa. Echefula a ndepụta ngwa ọdịnala na-echetara ma nke ahụ nwekwara ike ịba uru kwa ụbọchị.
Tickick - Todo & Task List
Developer: Ngwa Inc.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » TickTick bụ ngwa maka ndepụta ịme ihe nke ị na-ekwesịghị ịhapụ
A na-edozi akpụkpọ anụ Fortnite ọzọ nke Samsung ga-enye na Galaxy S20
Mbugharị kachasị anya nke Galaxy S20 ga-enye anyị ga-abụ 5x